Voka-pifidianana ofisialin’ny HCC sisa: efa tsy azo ihodivirana ny fandresen-dRajoelina | NewsMada
Voka-pifidianana ofisialin’ny HCC sisa: efa tsy azo ihodivirana ny fandresen-dRajoelina
Miroso tsikelikely any amin’ny fandresen’ny kandidà Rajoelina ny voka-pifidianana vonjimaika eny anivon’ny Ceni. Hany andrasana ato anatin’ny 10 andro eo ho eo sisa ny fanambaran’ny HCC ny voka-pifidianana ofisialy.
Biraom-pifidianana latsaky ny 100 sisa, hatramin’ny 7ora hariva, omaly ny tsy nahatonga ny vokatra eny anivon’ny Ceni Alarobia. Mazava fa mitarika amin’ny isan-jato 55.46% ny kandidà laharana faha-13 raha 44.54% kosa ny azon’ny kandidà laharana faha-25. Izany hoe manodidina ny 4 hetsy mahery eo ho eo ny elanelan’ny vaton’ny kandidà roa tonta ary mielanelanelana 10% eo izany.
Etsy andaniny, nitondra fanazavana manoloana ny fitakian’ny K25 ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry fa niseho tokoa ny fifanazavana teo amin’izy ireo sy ny solontenan’ny kandidà Ravalomanana, ny fiandohan’ny herinandro teo. « Nangataka ny hanomezana azy ireo ny antontan-taratasy rehetra momba ny fifidianana tamin’ny kaominina maromaro ny avy amin’ny K25, hanaovana ny fampitahana. Notanterahinay izany noho ny fotokevi-dehibe ijoroan’ny Ceni na tsy araka ny fepetra sy ny lalàna aza. Fa eo koa ny fandalanay ny mangaraharaha amin’ny fanatontosana ny fifidianana. Nekena izany mba hialana amin’ny ahiahy sy hipetrahan’ny fifampitokisana », hoy izy. Notsiahiviny fa nanomboka tamin’ny 9 ora maraina, ny alatsinainy teo ny fampitahana ireo antontan-taratasy rehetra ireo ka hatramin’ny 4ora sy sasany maraina ny talata. Mbola nitohy, hatramin’ny omaly ny fanohizana izany. Anisan’ny nojerena tamin’izany ny biletà tokana sy ny lisi-pifidianana ary koa ny tatitra an-tsoratry ny voka-pifidianana (PV).